Iphi iBentley eya kwindawo yoLuntu -iGeofumadas
Ikhaya/Zobunjineli/Apho iBentley ihamba kunye neMmandla woLuntu
Apho iBentley ihamba kunye neMmandla woLuntu
Wowu, umxholo uyathandeka kakhulu, andifuni ukucinga ngento endinokuyiqonda. Ndandiqalisile ukuzama kuthetha nge Geopak, kodwa ngoku nje ukuba i-PowerCivil isifikile nje, iyongisindisa ihlabathi, ndiza kufuneka ndivavanye ukuba konke okutshoyo kuyinyaniso.
Bentley ngaphambi ...
Ukuba kufanelekile iBentley inayo, licandelo lobunjineli. Imbali ye-Integraph lide Ngaloo ngqiqo, ekubeni iminyaka ye-70 kwakukho izisombululo zobunjineli iifowuni eziphambili, ngaphambi kokuba kubekho iMicstation kunye negama kwaye ngaphambi kokuba kubekho i-Civil3D, okanye iBentley okanye AutoDesk.
Yonke le mveliso yobunjineli yahlanganiswa kancane kancane sancocho shwa nkathelwa ngaphantsi ngaphantsi:
InRoads. Oku kuye kwaba neencasa ezintandathu:
-Iindlela zeNdlela kunye noCoceko
-Nika amandla kwiInRoads.
Geopak. Le ibinezi nguqulelo:
-Geopak Suite Engineering Engineering
MX. Le yinguqulelo enomdla eyayinayo yonke into, kwaye yayiyeyeyona meko ibalaseleyo yesiNgesi, yiyo loo nto yaphunyezwa ikakhulu yi-England ne-India. Ihlala ijolise kuyilo lwendlela, isebenza kwi-AutoCAD. Ikhona nakwiinguqulelo ze-AutoCAD 2008-andazi ukuba olo thando luza kuqhubeka- ngoku lukhona kwiMicrostation kunye neenguqulelo zamva nje zemihla ngemihla zikhangeleka ngathi zii-InRoads. Oku kusenza siqonde ngcono isithuba sabahlobo besiNgesi ngokuthelekisa iMX kunye ne-Civil 3D.
Ukuba sifuna ukubona indlela iBentley ezibeke ngayo kwindawo yoBunjineli, kufuneka sibone le mephu yase-United States. Imalunga neSebe lezoThutho: ama-26 ala mazwe asebenzisa ii-InRoads (52%), i-18 Geopak (36%) kunye ne-2 MX (4%).
Kwimeko ye-Armed Forces Engineering Corps, yinto efanayo, i-23 isebenzisa i-Inroads, kwaye i-4 isebenzisa iMX.
Indlela uBentley ayenayo ngayo ukuzimisela njengaye, inyanzelo Intergraph, ngubani owayengumninimzi we-InRoads kude kube nguDisemba wonyaka we-2000, xa uBentley uthenge lonke kwaye kunjalo, iphothifoliyo yomsebenzisi.
Kwixesha le-Integraph, nakwii-InRoads zasebenza IntelliCAD, Ngenye imini ndifumene ingxelo ebaleka njengekhubalo kwiMicrostation 95, ndinomdla wokuba le ndoda ithi ayisuki apho kuba yonwabe kakhulu. Ilungele iBentley, kuba andicingi ukuba ndingamfumana umsebenzisi onenkani enjalo usebenzisa i-AutoCAD R12.
Kwinqanaba laseLatin yaseMelika, kungabali iBrazil enye enye yokuphumla, ihamba phambili ngokusebenzisa i-InRoads:
IWalsh yasePeru (eLima)
IYunivesithi yamaKatolika yaseLima
IGrana kunye noMontero
Amanzi aseIllimani (eBolivia)
Bentley kumaxesha adlulileyo ...
Kwicala le-AutoDesk, silubonile uphuhliso olunomdla, nangona kungenjalo ngokuqhubeka okufanayo, ngamaqabane aphilayo okanye iinkampani ezithengwe yi-AutoDesk. Injalo imeko yomgca we-Eagle Point, iSoftDesk, i-CivilCAD, i-Desktop yoMhlaba, ukukhankanya ezimbalwa. Enye yezona zinto zamva nje kwaye ndicinga ukuba i-AutoDesk iya kuyigcina i-Civil3D, ebandakanya okwenziwe yimephu ye-AutoCAD.
Kwenzeka ntoni ukuba i-AutoDesk inesikhundla sehlabathi kumaqonga ayo ahlukeneyo, ngokwexwebhu elivezwe yi-AutoDesk, abasebenzisi abazizigidi ezi-6 emhlabeni basebenzisa into ebaleka kwi-AutoCAD kwaye kwezi, ezingama-30,000 ngabasebenzisi be-Civil3D. Olu datha lokugqibela luvakala lulungile, mhlawumbi kungenxa yoko le nto amakhwenkwe eBentley engenakukhetha ngaphandle koko vuyela xa ba zi khankanya kunye enkulu bug (ibinzana eliqhelekileyo elisela kwi-Facebook).
Nangona kunjalo, kunokuthiwa uBentley ujabule ngesimo sakhe kwintsimi yeZityalo kunye noNjineli, kunye nabaxhasi sooo enkulu. Ukufunyanwa kwayo okusha kunye nophuhliso zijolise ekomelezeni ukukhula kwayo I-model, XM (akukho MX), kulabo bangandichukumisayo kwaye ngoku ndiyakhumbula: UKUQALA kwizakhiwo, Ulungelelanisa iindlela zokufumana amanzi kunye ne-GINT ye-geotechnics.
Ngoxa i-AutoDesk ifumana ngaphezulu kwintsimi ye-animation, kungenzeka ukuba i-Bentley ihlose ukudibanisa indawo yayo njengoko ihlaziya iteknoloji yayo.
Bentley iya kuphi ...
Uyibonile, nakum ngenye imini kwakunzima ukuba ndiqonde incasa ye-InRoads, evakalayo kodwa ngenxa yezizathu ezithile, enye inguqulelo ihlala isilela ekusebenzeni okukunye kuphela. Yiyo loo nto uBentley esiya kwinto ayibiza ngokuba yiPowerCivil, kubandakanya:
PowerCivil kwiLatin America.
Ngokoluvo lwam, loo nto omkhulu, ingakumbi ngenxa izixhobo ngasentla, nangona kukho yayisoloko PowerInRoads kunye PowerGeopak version, abanye baba mvume efuna mvume evela Microstation.
Ixesha elizayo le-InRoads?
I-InRoads iya kuqhubeka ukuba ngunina wamantshontsho kubasebenzisi bakudala beli candelo, nakwabo banelayisenisi yeMicrostation kwaye bafuna kuphela ukufumana ii-InRoads, ngokungahambi kakuhle kweencasa ezahlukeneyo (isaqhwithi kunye nococeko, uPhando). Ngale nto into engalunganga yile:
I-InRoads ayinayo i-module module, kakuhle, loo okanye Vulcan. Amaqonga wonke umntu uyayisebenzisa, ukumbiwa kwemigodi, uyilo, ubunjineli. Kwakungekho namanzi (ngoku afakwe kwi-InRoads Storm kunye noGuqulelo lweSanitary) kunye ne-topography (InRoads Survey).
Ngoko, yintoni iM PowerCivil?
IPowerCivil inakho konke okwenziwa ngumsebenzisi wobunjineli. I-Spain kunye neLatin America iinguqulelo ziyafana, umahluko kwimigaqo abayizisayo, i-USA injalo omnye umtsalane wegringos. Ke, ukuba bekuyimfuneko ukuyichaza:
I-PowerCivil: Zii-InRoads ezinamaqonga, umjelo wamanzi, ubume bendawo, iMicroStation nakwiSpanish.
Siza kubona indlela ndijonga ngayo iimpawu zayo.
URoger Penwill, ukuhleka kwee-cadistas
PowerCivil kwiLatin America, okokuqala ngqondweni
ZORHWEBO ZE-UAV EXPO AMERICAS
Yintoni ephakanyisiweyo ngeenkonzo zeBentley kunye neWMS?
Ikhosi yeArcGIS Pro-esisiseko
Funda iArcGIS Pro ngokulula - sisifundo esenzelwe abo banomdla kwiinkqubo zolwazi lwendawo, abafuna ...
Ikhosi yokuModela uMkhukula-i-HEC-RAS kwasekuqaleni
Uhlalutyo lwezikhukula kunye nezikhukula ngesoftware yasimahla: I-HEC-RAS HEC-RAS yinkqubo yomkhosi wamajoni oNjineli ...